Dayniile Online daily news From Somalia Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames. Murashaxa Al-Xaaji Maxamed Yaasiin oo magaalada Ankara kulamo kula qaatay mas'uuliyiin ka tirsan dowlada Turkiga
Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames. Al-Xaaji Maxamed Yaasiin oo ka mid ah murashaxiinta u taagan doorashada xilka madaxweynaha Somalia ee dhowaan la qaban doono ayaa dhawaan socdaal ku tagay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga halkaasoo uu kulamo kala duwan kula qaatay masuuliyiin ka tirsan dowlada dalkaas iyo qaar kale oo madax ka ah heyaddo iyo axsaab ka dhisan Turkiga.
Murashaxa Al-Xaaji Maxamed Yaasiin ayaa madaxda ka tirsan dowlada Turkiga ee uu la kulmay waxaa ka mid ah ku-xigeenka wasiirka Awqaafta dalka Turkiga iyo Agaasimaha Guud ee wasaaradaas iyagoo ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee Somalia iyo sidii doorashada madaxaweynenimo ee dhowaan laga qaban doono Somalia ay ugu dhici laheyd qaab cadaalad ah.
Waxaa kulankaas ka hadlay Musharaxa Al-Xaaji Maxamed Yaasiin oo dowlada iyo shacbiga Turkiga uga mahad celiyey gargaarkii hagar la'aanta ahaa ee ay u fidiyeen dadkii ku tabaaloobay abaarihii ka dhacay dalka sanadkii hore iyo mashaariicda horumarineed ee ay illaa hadda ay ka wadaan dalka.
Murashaxa Al-Xaaji Maxamed Yaasiin ayaa sheegay in dowlada Turikiga ay muujisay sida ay uga go'antahay iney garab istaagto umada Soomaaliyed ee walaalahood, isagoo ugu baaqay iney sii xoojiyaan kaalmada ay u fidinayaan dadka Soomaaliyeed ee weli dhibaatadu heysato, wuxuuna dhinaca kale ka codsaday madaxda Turkiga iney gacan ka geystaan sidii doorashooyinka madaxtinimo ee dhowaan laga qaban doono dalka ay si cadaalad ah ugu qabsoomi lahaayeen.
Wasiir ku-xigeenka Awqaafta dalka Turkiga iyo Agaasimaha Guud ee wasaaradaas oo iyana kulankaas ka hadlay ayaa sheegay in taageerada ay siiyaan walaalahood Soomaaliyeed ay tahay mid waajib ah maadaama labada umadood ay yihiin kuwo islaam ah, waxayna balan qaadeen in dowlada iyo shacabka Turkiga ay sii wadi doonaan kaalmada ay siiyaan umada Soomaaliyeed inta ay dhibaatada ka baxayaan.
Murashaxa Al-Xaaji Maxamed Yaasiin ayaa sidoo kale kulamo la qaatay Xoghayaha guud Ururka Adduunka ee Maamulka Gobolda iyo madaxa Machadka Samanyolu oo ku yaala magaalada Ankara, sidoo kale waxaa kulan uu la qaatay Guddoomiye ku-xigeenka Xisbiga Caddaalada iyo Horumarka ee haya talada dalka Turkiga iyo Guddoomiyaha Rugta Ganacisga ee dalkaas.
Sidoo kale Murashaxa Al-Xaaji Maxamed Yaasiin ayaa waxaa magaalada Istanbul qado Sharaf soo dhoweyn iyo maamuus leh ugu sameeyey Ururka Nabadda ee Capital Platform oo ah urur ka dhisan dalka Turkiga, iyadoo madaxda ururkaasna ay sheegeen in Somalia ay u baahan tahay inuu hogaamiyo qof daacad ah sida Musharaxa Al-Xaaji Maxamed Yaasiin oo ay xuseen inuu dhibaatada ka saari karo.
Murashaxa Al-Xaaji Maxamed Yaasiin oo sidoo kale ah ganacsade si weyn looga yaqaano geeska Afrika ayaa mudooyinkanba socdaal ku marayey dalal kala duwan oo caalamka ka tirsan isagoo madaxda dalalkaas u sharaxayey qaabka uu dalka ku hogaamin doono haddii loo doorto xilka madaxweynaha Somalia oo uu sharaxan yahay. Xafiiska Warqabadka Dayniile.com